Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manidina mankany Tel Aviv amin'ny Air India: Nanokatra habakabaka i Saudi Arabia ho an'ny sidina fohy kokoa
Tao anatin'ny hetsika tsy mbola nisy toa azy sy manan-tantara, Saudi Arabia dia hanome fidirana tanteraka amin'ny habakabaka ho an'ny mpikambana Star Alliance Air India, amin'ny sidina ara-barotra mankany Tel Aviv.
Ny sidina avy any India mankany Tel Aviv, dia kasaina hanomboka tsy ho ela, noho ny fifandraisana feno fankahalana taloha teo amin'i Saudi Arabia sy Israel, ny fampiasana ny habakabaka taloha ho an'ny sidina ara-barotra rehetra mankany Israel.
Ity hetsika ity dia hampihena ny ora sidina mandritra ny adiny roa, satria ny sidina Israeliana teo aloha dia tsy maintsy nivily lalana ary nitety ny Ranomasina Mena sy ny Saikinosin'i Arabia, ka nampitombo ny fanjifana solika. Araka ny fanambarana nataon'ny praiminisitra Israel, Benjamin Netanyahu, dia nanao sonia androany io fifanarahana fanapahana lalana io eo amin'i Saudi Arabia sy Air India.
Ny fiaraha-mientana eo amin'ireo fahavalon'i Saudi Arabia sy Israel taloha dia hetsika diplaomatika ambadika mba hanoherana ny fitomboan'ny fitaintainana amin'ny fisian'ny Iran ho fanjakana nokleary. Israel dia manome vola ara-bola USD 750,000 ho an'ny Air India